Sajhasabal.com | Homeमधुमेहका बिरामीले फलफूल खाने कि नखाने जानीराखाैं ?
अछामका पालिका प्रमुखमा कांग्रेस र वडामा एमाले अगाडि
मधुमेहका बिरामीले फलफूल खाने कि नखाने जानीराखाैं ?
Posted on: 25 Apr, 2022
वैशाख १२, काठमाडाैं | मधुमेह वा डायबेटिज यस्तो रोग हो, जसलाई थोरै लापरवाही गर्दा पनि मुश्किल हुने गर्दछ । यो रोगका बिरामीका लागि सबैभन्दा खतरा खाना खाइसकेपछि जब ब्लडमा शुगरको मात्रा प्रभावित हुने गर्दछ तब धेरै खतरा रहन्छ ।
तर यसको खतरालाई कम गर्न सकिन्छ । यसको लागि तपाईंले जम्म १५ मिनेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । मात्र तपाईंले खाना खाइसकेपछि १५ मिनेट हिँड्नु पर्दछ । एक अनुसन्धानले खाना खाने बित्तिकै १५ मिनेट हिँड्ने डायबिटिजका बिरामीमा शुगर बढ्ने खतरा कम हुन्छ ।
दिउँसोको खाना खाएपछि उत्पादन हुने इन्सुलिनको मात्रा दिनभरमा कम हुने गर्दछ । किनकि दिनमा धेरै हिँडडुल गर्नु पर्ने हुन्छ । तर रातको समयमा खाना खाएपछि हिँडडुल गरिँदैन र बसिरहँदा रगतमा ग्लुकोज बढ्ने सम्भावना धेरै रहन्छ ।
हिँडडुलको दौरान हाम्रो शरीरमा ग्लुकोजको खपत हुन्छ र यसले रगतमा शुगर बढाउने सम्भावना कम गर्दछ । यसले डायबिटिजका बिरामीका लागि शुगर नियन्त्रण राख्न मद्दत पुग्दछ ।
तर, कहिलेकांही सोधिन्छ- मधुमेहको समस्या भएका व्यक्तिहरु फलफूल खान त सक्छन् । तर, के उनीहरुले फलफूलको जुस पनि पिउनुहुन्छ ? यसको सरल जवाफ हो-हुँदैन । फलफलूलको जुसमा चिनीमात्र हुने भएकाले पनि यस्तो गर्नु हुँदैन । सुगर ब्यालेन्स गर्न त्यसमा फाइबर केही पनि हुँदैन । त्यसैले पनि मधुमेह भएका व्यक्तिहरुले जुस भन्दा फलफूलमा नै बढी जोड दिनुपर्छ ।
तर, केही फलफूल खाँदा पनि मात्रालाई ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो कि अंगुर खाँदा एक मुठी अंगुरको आधाभन्दा धेरै खानु हुँदैन । त्यस्तै, तरबुजा पनि २ स्लाइसभन्दा धेरै खानु हुँदैन । आँप पनि मधुमेह भएका व्यक्तिहरुलाई ठिक हुँदैन । चिकित्सकहरु त दिनमा एक स्लाइसभन्दा धेरै आँप खान नहुने बताउँछन् ।
मधुमेह हुनेहरुले अर्को खानै नहुने फलफूल भनेको केरा हो । उनीहरुले केराको मात्रा अत्यन्त कम खानु पर्ने हुन्छ । दिनमा एउटा केराको आधा मात्र खाँदा उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ ।
डायबिटिजका बिरामीहरुले फलफुल खाँदा धेरै सावधानी अपनाउनु पर्दछ । डायबिटिजका बिरामीले कुन फल कति मात्रामा खाने यस्तो भन्छ्न बिज्ञहरु :
१. धेरै पाकेको फलको तुलनामा कम पाकेको या काँचोमा सुगरको मात्रा कम हुन्छ । त्यसकारण धेरै पाकेको फल खाँदा विचार पुर्याउनुपर्छ । फलफूलको बोक्रामा फाइबरको मात्रा प्रचुर हुने भएकाले स्वादका लागि सबै फलका बोक्रा खानु राम्रो होइन ।
२. फललाई आफ्नो डाइटमा राख्नुपर्छ, राख्न आवश्यक पनि छ, तर सबै फल डायबिटिजका लागि स्वास्थ्यवद्र्धक हुँदैनन् । खरबुजा, आँप, कागती, चिकुजस्ता फल स्वास्थ्यका लागि निकै सहयोगी हुन्छन्, तर खाँदा मात्रामा ध्यान पुर्याउन निकै आवश्यक छैन ।
३. सुगरको मात्रा कम हुने फलफूलजस्तै नासपाती, आँप, अम्बाको सेवन गर्नुस् ।
४. फलको जुसभन्दा फल नै सेवन गर्न लाभलायक हुन्छ । त्यस्तै बजारमा पाइने डब्बामा प्याक गरिएका जुस बिल्कुलै नपिउनुहोस् ।
स्वस्थ रहनका लागि के गर्ने, के नगर्ने ? यस्ता छन् ‘हेल्थ टिप्स’
अदुवा खानुहाेस्, हुन्छ स्वास्थ्यमा यी सात फाइदा